Citrine - Caleenta jilicsan oo ah quartz - Noocyo dhadhan ah - Video
Iibso dukaamadeenna citrine dabiiciga ah
Citrine waa quartz kala duwan. Midabku wuxuu u dhexeeyaa caleemaha huruudka ah ilaa qorraanta. Waxay u sabab u tahay qallayl aan nadiif ahayn. Citrine dabiiciga ah waa dhif. Dhagaxyo ganacsi oo badan ayaa ah ametis ama sidoo kale quartz sigaar ah oo lagu sameeyay daaweyn kuleyl ah. Si kastaba ha noqotee, amethyst kuleylka kuleylka leh waxay yeelan doontaa xariiqyo yar oo ku yaalla barafka. Ka soo horjeeda dabiiciga citrine ee dabiiciga ah ama muuqaalka sigaarka. Way ku dhowdahay in la kala saaro inta u dhexeysa citrine iyo jajabka topaz ee muuqaalka ah. Laakiin way kala duwan yihiin. Brazil waa soo saaraha ugu sarreeya citrine. Ku dhowaad wax soo saarkeeda ka soo jeeda gobolka Rio Grande do Sul. Magaca ayaa ka yimid ereyga circa ee citrina. Taas macnaheedu waa huruud iyo sidoo kale asal ahaan erayga erayga.
Citrine waxaa markii ugu horeysay lagu qiimeeyaa dahabka dahabka ah ee dahabka ah ee Giriiga. Inta u dhaxaysa 300 iyo 150 BC. Inta lagu jiro da'da Hellenistik. Quartz jaalaha ah ayaa loo isticmaalay kahor intaan lagu qurxinayno dahabka iyo qalabka. Laakiin ma aha mid aad loo raadsaday-kadib.
Quartz waa macdan. Waxyaabaha ay ka kooban tahay silikoon iyo jajabyo oksijiin ah. In qaab joogto ah oo SiO4 silicon-oxygen tetrahedra. Iyadoo oksijiin kasta lagu wadaago inta u dhaxaysa laba tetrahedra. Siinta shey kasta oo kiimiko ah ee SiO2. Waxa kale oo ah macdanta labaad ee ugu macdanta badan ee dhulku ka soo baxo dhulkiisa, ka dibna feldspar.
Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo ah quartz. Waxay yihiin dhagaxyo qaali ah oo qiimo leh. Tan iyo markii hore, noocyo quartz ah ayaa ahaa macdanta ugu badan ee loo isticmaalo. In la sameeyo sameynta dahabka iyo dhagxaanta adag. Gaar ahaan Eurasia.
Takeo waa gobolka Cambodia. Ku taalla koonfur galbeed ee Cambodia, Takeo xuduudaha gobolada Kampot ee galbeedka. Waxa kale oo xuduud la leh Kampong Speu xagga galbeed. Kandal ilaa waqooyiga iyo bari. Xuduuda koonfureed waa xuddun caalami ah oo ay la leedahay Vietnam. Magaalada caasimada gobolka Doun Kaev. Hore waxaa loo yaqaan 'Takeo'. Waa magaalo yar oo leh dadweynaha 39,186.
Citrine 33.64 CT, ka Takeo, Cambodia